Linux Foundation Inosvitsa CHITI KUSANGANISIRA Vhura Sosi Rezinesi Kuteedzera | Linux Vakapindwa muropa
Linux Foundation Inotangisa CHITI KUSVIRA Vhura Open Source Rezinesi Kuteerera
Iyo Linux Foundation ichangoburitsa chirongwa cheCIT (Automated Compliance Tooling), iyo ichashanda pakugadzira maturusi ane chekuita nekuona kutevedza zvinodiwa nemarezinesi akavhurika
El Chinangwa chikuru cheCIT kusimbisa mari muzvishandiso izvi, kuve nechokwadi chekubatika pakati pavo nekuwedzera kushandiswa, izvo zvinobatsira masangano kubata zvisungo zvekuteerera.
1 Nezve ACT
2 Ndeapi mapurojekiti anozove chikamu cheCIT?
2.1 Mamwe mapurojekiti maviri anobatanawo
Kutanga inosanganisira maturusi anoshandiswa kugadzirisa nzvimbo dzakadai sekugadzirisa metadata neruzivo nezve marezinesi ekodhi, kuongororwa kwemapurojekiti echikwereti chekodhi uye kushandiswa kwemalayisensi akavhurika, kuongororwa kwekuenderana kwezvigadzirwa zvakagadzirwa neakavhurika uye emahara marezinesi.
Zvishandiso zvinobvumidza makambani kurerutsa basa ravo kusangana nechero mvumo yezvigadzirwa zvinovhurwa.
Zvakare nekugona kuita kuongororwa kweatsva software kutsamira kana kuongorora kodhi Yakagadziridzwa kuseri kwemasuo akavharwa kuti urege kuwedzera zvinhu zvakagoverwa pasi pemarezinesi asingaenderani.
Iwo maturusi anogona zvakare kupa rwakakosha rubatsiro mukutarisa kuteedzera rezinesi kune makuru mapurojekiti anoshandisa musanganiswa wezvakawanda zvakavhurika uye zvine chekuita nezvezvinhu.
Somuenzaniso, Izvo zvinokwanisika kuona marezenisi akavhurika ane chekuita nekodhi, kuona mharadzano dzinogona kuitika nekukonana, kuongorora njodzi dzinogona kuitika uye kuvaka mepu yezvivakwa zvehungwaru zvinoshandiswa muprojekti.
Ndeapi mapurojekiti anozove chikamu cheCIT?
Iyo ACT chirongwa uye nemipiro yesangano reLinux Foundation ichagadzira maturusi anotevera:
FOSSology seti yematuru ekushandisa otomatiki kuona kwechokwadi mashandisiro emamwe marezinesi esoftware.
Source kodhi ongororo, pasuru metadata mepu mune DEB uye RPM mafomati, kuzivikanwa kwekopiriti, ma URL, uye email kero zvinotsigirwa Yakagadzirwa neHP.
QMSTR (Quartermaster) - Chishandiso chekushandisa pamwe nekumisikidzwa kwemaitiro ebhizinesi anooneswa ekugadzirisa kutevedzera rezinesi paunenge uchigadzira zvigadzirwa zve software.
QMSTR inosanganisirwa muDevOps CI / CD yekuvandudza kutenderera uye mudanho remusangano inounganidza metric neruzivo nezve kodhi yakaunganidzwa uye kutsamira kunoshandiswa. Iyo projekiti yakagadzirwa neEndocode.
Kuende (KUE) seti yezvinotsanangurwa uye zvinoshandiswa zvine chekuita pakutsikisa uye kuchinjana marezinesi uye ruzivo rwepfuma yekushandisa inoshandiswa mune zvakasiyana zvikamu zveesoftware mapakeji.
Iyo inobvumidza kudoma kwete chete iro rezinesi rese yehomwe yese, asiwo zvakasarudzika rezinesi remafaira uye zvidimbu zvega, varidzi vekodhi kodhi kodzero uye vanhu vakapinda mukudzokororwa kwechena kwayo kwakabvumidzwa.
Tern chishandiso chekuongorora mifananidzo yemidziyo, iyo inobvumidza iwe kuona kuti ndeapi mapakeji anoshandiswa kuumba ako ekuzadza. Iyo projekiti yakagadzirwa neVMware uye ndokuendeswa kuLinux Foundation.
“Kutevedzera marezinesi chinhu chakakosha zvikuru muzvinhu zvakasununguka.
NeQMSTR, isu takatanga kuvaka chishina chekushandisa chinotarisana nekutsvaga data uye nemazvo, zvakakwana, uye zvinyorwa zvepamusoro zvekuteerera zve software yega yega kuvaka.
Endocode inofara kupa QMSTR kuAIT uye kuendesa padanho rinotevera pamwe neLinux Foundation nevamwe vanobatirana navo muchirongwa, "akadaro Mirko Boehm, Endocode CEO weprojekti yeQMSTR.
Mamwe mapurojekiti maviri anobatanawo
ACT inogamuchirawo mapurojekiti maviri matsva anozotambirwa neLinux Foundation sechikamu chekutanga, kuwedzera kune maviri aripo Linux Foundation mapurojekiti anozove chikamu cheiyo purojekiti nyowani.
Iwo mapurojekiti matsva anoenderana kune aripo Linux Foundation kutevedzera mapurojekiti.
Izvi ndizvo zvakaitika OpenChain, iyo inoratidza yakakurudzirwa kiyi maitiro ekugadzira yakavhurwa sosi rezinesi kutevedzera kuve nyore uye kuenderana.
Uye Vhura Kuteerera Chirongwa, icho chinodzidzisa uye chinobatsira vanogadzira nemakambani kunzwisisa kwavo marezenisi zvinodiwa uye maitiro ekuvaka anoshanda, asina kupokana, uye anowanzoitwa otomatiki maitiro kutsigira kutevedzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Foundation Inotangisa CHITI KUSVIRA Vhura Open Source Rezinesi Kuteerera
Raven muverengi: yakanakisa muchinjika-chikuva uye yakavhurwa sosi RSS kuverenga
Yekutanga Kubernetes chengetedzo yekutadza inowanikwa